Yaa ugu Saamayn badan Dugsiga Qasabka Xabsiga? - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
(Waxaa daabacay: Dugsiga Waxbarashada ee Jaamacadda Maraykanka. Febraayo 24, 2021)
Dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga waxaa loola jeedaa dhaqamada iyo siyaasadaha si aan kala sooc lahayn u gelinaya ardayda midabka nidaamka cadaaladda dembiyada. Codsiga eexda ee tallaabooyinka adag ee edbinta iyo u -gudbinta xad -dhaafka ah ee fulinta sharciga ayaa ka qaybqaata dhibaatada, u -dhigidda ardayda nugul inay ku guul -darreystaan ​​iyo inay iska indha -tiraan sababaha hoose.
Sidee bay barayaashu u soo afjari karaan dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga? Tallaabada ugu horreysa ayaa ah in la tixgeliyo hab kale oo loo maro edbinta dugsiga.
Si aad wax badan u baratid, fiiri infographic (hoosta lagu dhajiyay) oo ay abuurtay Jaamacadda Mareykanka Doctorate in Policy Education & Leadership barnaamijka.
Khatarta Siyaasadaha Dulqaadashada Zero
Siyaasadaha dulqaadka eber-ka ayaa ka yimid dagaalka ka dhanka ah daroogada iyo sharciyada dambiyada adag oo si weyn u kordhiyay xabsi-wadareedka Mareykanka intii lagu jiray 1980-yadii iyo 1990-yadii. Ballaarinta siyaasadaha noocan oo kale ah si wax looga qabto dambiyada ka dhex dhaca dhallinta iyo bay'ada dugsiga ayaa horseeday waxa u doodayaasha waxbarashada iyo caddaaladda bulshada ay hadda ugu yeeraan dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga.
Asalka Siyaasadaha Dulqaadashada Zero
Siyaasadaha dulqaad la'aanta eber ee dugsiyada dadweynaha waxay asal ahaan ka soo jeedaan Xeerka Dugsiyada ee Gun-Free-ka ah ee 1994 (GFSA). Sida ku cad falkan, ciqaabta keenista hubka dugsiga waa ka -hakin ugu yaraan hal sannad -dugsiyeed. Hordhaca GFSA wuxuu horseeday ballaarinta siyaasadaha dulqaadka eber si loola jaanqaado dembiyada kale iyo kordhinta warbixinta loo dirayo fulinta sharciga. Laga soo bilaabo 1994, degmooyinku waxay kaloo qaateen siyaasado adag oo faraya in ciqaab adag la mariyo dembiyada aadka u yar iyada oo la isku dayayo in la niyad -jebiyo dambiyada waaweyn.
Saamaynta Siyaasadaha Dulqaadashada Zero
Siyaasadaha dulqaadka eber-ka ayaa si weyn u kordhiyay tirada ardayda la eryo ama la eryo. Tani waxay keentay cawaaqib xumo. Tusaale ahaan, ardayda ka maqnaata ugu yaraan 15 maalmood oo iskuul ah xitaa hal sano ayaa toddoba jibbaar u badan inay ka baxaan dugsiga sare. Ardayda ku guuldaraysta inay dhammaystaan ​​waxbarashadooda waxay u badan tahay inay la kulmaan natiijooyin taban sida faqriga, caafimaadka oo liita, ama waqtiga nidaamka cadaaladda dembiyada. Intaa waxaa sii dheer, waxaa la go'aamiyay in kala duwanaanshaha anshaxa dugsiga ay gacan ka geysaneyso kala duwanaanshaha fursadaha waxbarasho. Waxaa kale oo la go'aamiyey in ardayda Madow ay seegaan ku dhawaad ​​shan jeer maalmo badan oo waxbarid ah taas oo ka dhalatay ka-hakinta dugsiga ka baxsan marka la barbar dhigo ardayda caddaanka ah.
Intii jidka lagu jiray, dugsiyadu waxay shaqaaleysiiyeen saraakiil kheyraad dugsi oo dheeraad ah (SROs), xirfadlayaasha fulinta sharciga oo mas'uul ka ah amniga ardayga iyo ka hortagga dambiyada. Meelaynta SRO ee kordhay waxay keentay in la kordhiyo tirada ardayda la xiray, iyo sidoo kale tirada u gudbinta sharci fulinta iyo maxkamadaha dhallinta.
Yaa ugu Saamaynta Badan Dhuumaha Iskuulka-Xabsiga?
Tirakoobku wuxuu ka bixiyaa sawir mugdi ah: ardayda ka soo jeeda kooxaha la faquuqo ayaa ah halista ugu weyn ee lagu soo jiidi karo dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga.
Caqabadaha Khatarta ah ee Ku -lug -lahaanshaha Dhallinyarada ee Nidaamka Caddaaladda
Waxaa jira heerar kala duwan oo qatar ah oo ku saabsan ku lug lahaanshaha dhallinta ee nidaamka caddaaladda. Waxyaabaha halista u ah shaqsiga waxaa ka mid ah dabeecadaha aan bulshada ku habboonayn, kacsanaanta, iyo si xun u isticmaalka maandooriyaha. Sababaha halista qoyska waxaa ka mid ah waalidiinta xadgudubka leh, xaaladda dhaqan -dhaqaale ee hooseeya, iyo waalidnimada dhallinta. Waxyaabaha halista asaagga u ah waxaa ka mid ah u xoogsheegashada asxaabta, xubinnimada baandooyinka, iyo xiriirka bulsheed oo daciif ah. Arrimaha dugsiga iyo bulshada waxaa ka mid ah bulshooyinka saboolka ah ama aan nidaamsanayn iyo waxqabadka tacliinta oo liita.
Imisa Arday Ayaa Helay Ka Joojinta Dugsiga Ka-Baxsan?
2.7 milyan oo arday K-12 ah ayaa helay hal ama in ka badan oo ka-hakin dugsi ka-baxsan intii lagu jiray sannad-dugsiyeedka 2015-16. Tiradani waxay daaha ka rogtay saamayn aan ku habboonayn ardayda Madowga ama Afrikaanka Maraykanka ah. In kasta oo tirakoobkani ka koobnaa 8% ardayda lab iyo dheddig labadaba, waxay matalayeen 25% iyo 14% ka-hakinta dugsiga ka-baxsan ee lab iyo dheddig.
Marka la barbardhigo, ardayda caddaanka ah waxay heleen ganaaxyo ka baxsan dugsiga marka loo eego qiime ka hooseeya diiwaangelintooda. In kasta oo 25% tirada ardayda labka ah iyo 24% tirada ardayda ardayda ah ay ahaayeen caddaan, waxay matalayeen oo keliya 24% iyo 8% ka-hakinta dugsiga ka-baxsan, siday u kala horreeyaan.
Ardayda Hisbaanik ama Latinx, ardayda labka ah waxay heleen ganaax ka baxsan dugsiga oo ka badan ardayda dheddigga ah. Hispanc iyo Latinx lab iyo dheddig labaduba waxay ahaayeen 13% tirada ardayda, laakiin waxay matalayeen 15% iyo 6% ka-hakinta dugsiga ka-baxsan, siday u kala horreeyaan.
Imisa Arday Ayaa Sameeya Gudbinta Meelmarinta Sharciga iyo Saameynta Xarigga?
290,600 arday ayaa loo gudbiyay hay'adaha sharci fulinta ama la xiray intii lagu jiray sanad dugsiyeedka 2015-16. Kaliya 15% ardaydu waxay ahaayeen Madow ama Afrikaan Ameerikaan ah, laakiin ardaydani waxay matalayeen 31% tixraacyada fulinta sharciga iyo xiritaanka. 49% ardaydu waxay ahaayeen caddaan, laakiin ardaydani waxay matalayeen kaliya 36% tixraacyada fulinta sharciga ama qabashada. 26% ardayda waxay ahaayeen Hisbaanik ama Latinx, waxayna ardaydani matalayeen 24% tixraacyada fulinta sharciga ama xiritaanka.
Sababta Ardayda Midabkoodu Saamayn La'aanta U Leedahay
Ardayda ka soo jeeda bulshooyinka la hayb-sooco waxay u badan tahay inay ku dambayn doonaan dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga sababtoo ah cunsuriyad nidaamsan. Sidoo kale loo yaqaan cunsuriyadda qaab -dhismeed ama hay'ad, cunsuriyadda nidaamsan waxaa loola jeedaa nidaamyada iyo siyaasadaha abuura iyo/ama sii haya sinnaan -la'aanta.
Tallaabooyinka edbinta ee keena gudbinta maxkamadda, ka -hakinta, ama cayrinta - kuwaas oo dhammaantood kordhiya suurtagalnimada ka -tegidda iyo gelitaanka nidaamka caddaaladda dhallinta - ayaa si aan habboonayn loogu dabaqayaa ardayda midabka leh. Intaa waxaa dheer, ardayda Madow waxay u badan yihiin kuwa dhiggooda caddaanka ah in la hakiyo, la eryo, ama la xiro si la mid ah anshaxa. Intaas waxaa sii dheer, ardayda Madowga ah waxaa la ganaaxay ama la eryayaa ku dhawaad ​​3.5 jeer ka badan tan ardayda caddaanka ah.
Sida Ardayda Midabkoodu Saamaynta U Leedahay
Dhuumaha iskuul-ilaa-xabsi ayaa keena in tiro aan isku dheelitirnayn oo ardayda midabka leh ay dugsiga ka tagaan oo galaan nidaamka cadaaladda dembiyada, taas oo yeelan karta saamayn taban oo nolosha wax ka beddelaysa.
Tusaale ahaan, ardayda ku guuldaraysta inay dhammaystaan ​​dugsiga sare waxay u badan tahay in la xidho. Tani waxay iyaga siinaysaa diiwaanka dembiga, taas oo markaa sii adkayn karta inay helaan guriyeyn, dhisaan sumcad, helaan shaqo, iyo inay u qalmaan gargaarka dadweynaha. Intaa waxaa dheer, ardayda lagu helo dembi culus waxay la kulmaan xitaa carqalado waaweyn xagga shaqo helidda, waxayna waayi karaan xuquuqdooda codbixinta iyo u -qalmitaanka gargaarka maaliyadeed. Ardayda aan dhammaysan dugsiga sare ayaa iyaguna sii wata inay helaan mushahar hoose marka loo eego kuwa dhiggooda ah ee qalin jabiya.
Awoodda Bogsiinta ee Cadaaladda Soo Celinta
Si gacan looga geysto tirtiridda dhuumaha iskuulka ilaa xabsiga, barayaashu waa inay tixgeliyaan inay ku beddelaan siyaasadaha dulqaad la'aanta eber cadaalad dib u soo celinaysa.
Qaab Cusub: Cadaalad Soo Celin
Caddaaladda dib -u -soo -celinta waxay raadineysaa inay fahanto sababaha asaasiga ah ee dhaqan -xumada, hagaajinta dhaawaca, iyo dhisidda dareenka bulshada. Hawlgalkani wuxuu u kala baxaa dhawr dhaqan oo dib u soo celin ah. Dhaqanka ugu horreeya ayaa ah in wax laga qabto farqiga u dhexeeya habdhaqanka anshaxa iyada oo dib loo eegayo lana kormeerayo siyaasadaha iyo dhaqammada si loo hubiyo in tallaabooyinka edbinta si aan caddaalad ahayn loogu dhaqmo. Dhaqanka labaad ayaa ah in la abuuro jawi iskuul oo taageersan oo diiradda saara heshiiska iyo dhexdhexaadinta halkii ciqaab lagu ciqaabi lahaa. Dhaqanka saddexaad waa in la isticmaalo tababar xirfadeed iyo horumar si loo horumariyo kartida dhaqanka, loo ballaadhiyo xirfadaha isgaarsiinta, wax looga qabto eexda dhaqanka, waxna looga barto dhaawacyada waxbarashada.
Caddaaladda soo -celinta waa hab kale oo loogu talagalay edbinta dugsiga oo awood u leh inay daaha ka qaaddo sababaha asaasiga ah ee anshax -xumada iyo hagaajinta natiijooyinka ardayga. Maalgelinta caafimaadka ardayda iyo fayoobaantooda, barayaashu waxay maalgelinayaan mustaqbalka waddankan.
Ururka Xoriyadaha Madaniga ah ee Mareykanka, 11 Milyan oo Maalmood ayaa Lumay: Jinsiyada, Anshaxa, iyo Badbaadada Dugsiyada Dadweynaha Mareykanka (Qeybta 1)
Mashruuca Hamilton, Toban Xaqiiqooyin Dhaqaale oo Ku Saabsan Dembiyada iyo Maxaabiista Maraykanka
Machadka Siyaasadda Caddaaladda, Dugsiga Qasabka Xabsiga, Waa la Fasiray
Xarunta Qaranka ee Tirakoobka Waxbarashada, Tusaha 15; Haynta, Ka -hakinta, iyo Eryidda
Ururka Waxbarashada Qaranka, Anshaxa iyo Dhuumaha Dugsiga-Xabsiga (2016)
Baxnaanintu waxay awood u siisaa Riyooyinka, Dugsiga ilaa Dhuumaha Xabsiga: Arrinta, Xalka, iyo Mabaadi'da Hagidda ee la tixgeliyo
Mashruuca Xukunka, Ameerikaanka leh Diiwaanka Dambiyada
Joornaalka Jaamicadda ee Barashada Adeegga & Cilmi-baaris Ku-saleysan Bulshada, Laga bilaabo Ciqaab ilaa Soo-Celin, Ciqaab ilaa Bogsiin: Adeegsiga Cadaaladda Soo-celinta ee Dugsiga si loola dagaallamo Siyaasadaha Dulqaadashada Zero-ga iyo Dhuumaha Dugsiga-ilaa-Xabsiga
Waaxda Waxbarashada Mareykanka, Maqnaanshaha joogtada ah ee Dugsiyada Qaranka
Xafiiska Waaxda Waxbarashada ee Mareykanka ee Xuquuqda Madaniga, 2015-16 Cimilada iyo Badbaadinta Xogta Xuquuqda Madaniga ee Dugsiga
Youth.gov, Halista & Waxyaabaha Ilaaliya
# cadaalad deg deg ah
# Dhuunta iskuul ilaa xabsi
Barida ku saabsan jinsiyada, cunsuriyada iyo rabshadaha booliska
Kheyraadkan, oo ay soo diyaarisay Dulqaadka Barista, waxay gacan ka geysan kartaa kicinta doodda aadka loogu baahan yahay eex la'aanta iyo midabtakoorka nidaamsan, waxayna sidoo kale awood u siin karaan ardayda inay dejiyaan isbeddellada abuuri kara bulsho caddaalad badan. [sii wad akhriska…]
Burburinta Cunsuriyada Habaysan ee Nidaamku Waxay Ka Bilaabantay Dugsiyada
August 12, 2020 Warar & Muuqaal 0
Barashada cunsuriyada ka soo horjeedka maahan wax cusub, laakiin sanadihii ugu dambeeyay ayay kacday, iyadoo barayaasha adduunka oo dhami ay sameysanayaan iskaashatooyin barbaariyeyaal ka soo horjeedda cunsuriyadda. Waxayna hadda umuuqataa mid deg deg ah, maadaama COVID-19 ay kashifday sinaan la’aan qoto dheer oo bulsho iyo midab. [sii wad akhriska…]
Kala Hadlida Aqoonyahanada Sare Runtii Dagaalka Waxay I Caawisay Inaan Wax Ka Qabto Dhibaatadaydii Inaan Noqon Askari
April 24, 2016 Warar & Muuqaal 0
Rory Fanning, oo ah ruug cadaa militari, wuxuu kala hadlayaa ardayda dugsiga sare runta dagaalka. Haddii qof dhalinyaro ah uu saxiixayo inuu dilo oo uu u dhinto sabab ama xitaa ballanqaad nolol wanaagsan, markaa waxa ugu yar ee isaga ama iyadu ay tahay inuu ogaado waa wanaagga, xumaanta iyo fool-xumada shaqada. Fanning sidoo kale wuxuu xusayaa in adduun aan qabyo ahayn, dhuumaha iskuulka iyo millatariga ee JROTC uu halbawle u yahay dagaalka joogtada ah ee Washington ee guud ahaan Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Afrika. Isku dhacyadeeda aan dhamaadka lahayn waa suurtagal kaliya sababtoo ah caruurta sida kuwa uu kala hadlay fasalada yar ee uu booqday waxay sii wadaan tabaruca. Siyaasiyiinta iyo guddiyada iskuulka, marar badan, waxay ku andacoodaan in nidaamyadooda iskuulka ay burbureen. Lacag looma hayo buugaagta, mushaharka macallimiinta iyo hawlgabka, qado caafimaad qabta. Hase yeeshe, 2015, dowladda Mareykanka waxay ku bixisay $ 598 bilyan milatariga, in ka badan kalabar miisaaniyaddeeda ikhtiyaariga ah, iyo ku dhowaad 10 jeer wixii ay ku bixisay waxbarashada. [sii wad akhriska…]